काठमाडौंमा ‘कडा खालको’ स्वाइन फ्लू भेटियो, यसकारण यो पटक बढी सतेच हुनुपर्छ ? – Tourism News Portal of Nepal
काठमाडौंमा ‘कडा खालको’ स्वाइन फ्लू भेटियो, यसकारण यो पटक बढी सतेच हुनुपर्छ ?
रिचा अर्याल, ४ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंमा देखिएको स्वाइन फ्लू (एच वान एन वान् भाइरस) नयाँ प्रकारको हुन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरुले सचेतता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
भारतमा समेत मिचिगन नामक स्वाइन फ्लूबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढ्दोछ । सन् २०१६ को अन्त्यतिर देखा परेको यस रोगविरुद्ध खोप -भ्याक्सिन) लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुझाव दिँदै आएको छ ।साभार अनलाइनखबर